Kenya..Hooyo Caruurteeda Dhagax U Karisay Oo Ilmihii Ka Dhinteen | Xaqiiqonews
Kenya..Hooyo Caruurteeda Dhagax U Karisay Oo Ilmihii Ka Dhinteen
Mary Kaingu oo ah gabar yar oo afar bil jir, ayaa dhimatay ka dib markii hoyadeed ay u karisay “dhagax” baahi darteed”, tuulo yar oo hoos timaada Kisauni, oo ka tirsan gobolka Mombaasa ee dalka Kenya.
Gabadha yar ee Mary ayaa ku dhimatay isbitaalka Coast General Hospital, halkaasi oo gabadha loola cararay ka dib markii lagu arkay “calool xanuun daran”.
Oohinta iyo taaheeda gaajada darteed ah ayaa ku qasbay hooydan 36 jirka ee lagu magacaabo Peninah Bahati, in ay biyo kuleel dabka saarto dhagaxna ku rido sida ay caruurteeda ugu maleeyaan in cunto loo karinaayo.
Prischah Momanyi, oo deris la ah hooyada ayaa soo dhigtay baraha bulshada hooyadan oo caruurteeda ku sasabeysa biyo kuleyl oo dabka saaran iyo dhagax ku dhax jira.
Asha Mohamed oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa bixisay baabuur keeda, si loo soo qaado jirka gabadha dhimatay loona geeyo Mariakani, oo ah halka uu ku aasanyahay aabaheed.
Sidoo Kale Aqri..Diyaarad Kenyan ah Oo Lagu soo riday Soomaaliya..xogtii u dambeysay
Elephant Memory oo ka falceliyey dhacdada ayaa yiri ” Murug ” isagoo hadalka sii wada ayuu yiri “waa kaas halkii shir jaraa’id lagu qabanaayo lacag dhan 70 milyan oo shilinka Kenya ah, waa kaa wali lacag lagu bixinaayo dhimashadi joma Kenyatta ama Moi.” waxa uuna daba dhigay kalimad Sawaahili ah “ Wajinga sisi” oo macnaheedu tahay “maxaan doqomo nahay”.